Shirkii Musharaxiinta ee maanta oo faah faahin laga bixiyay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shirkii Musharaxiinta ee maanta oo faah faahin laga bixiyay
Shirkii Musharaxiinta ee maanta oo faah faahin laga bixiyay
Shirkii maanta Magaalada Muqdisho uga furmay Musharaxiinta Xilka Madaxweyninimada Somaliya, ayaa waxaa laga bixiyay faah faahin, iyadoo maanta uu ahaa maalintii koowaad ee ay isugu yimaadeen Musharaxiinta shirkaasi.
Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid Musharaxiinta Xilka Madaxweyninimada Somaliya oo la hadlay Saxaafadda ayaa sheegay maanta Shirka inuu ahaa iscafin & walaaca Musharaxiinta ay ka qabaan doorashada Somaliya & hanaanka dimuqraadiyada curdanka ah ee dalka uu cagaha la galay.
Waxa uu sheegay Musharaxiinta si isku mid inay meel uga soo wada jeedaan sidii dalka uu uga gudbi lahaa marxaladda uu hadda ku sugan yahay, islamarkaana ay u dhici laheyd doorasho lagu wada qanacsan yahay.
Musharax Daahir Geelle ayaa sheegay marnaba in aanan la aqbaleyn Guddi Doorasho oo ay ku jiraan xubno ka tirsan Nabad Suggida Somaliya, islamarkaana loo baahan yahay Guddi doorasho oo si hufnaan leh uga shaqeeya arrimaha doorashooyinka dalka.
Shirka Musharaxiinta ayuu sheegay inuu sii socon doono labada maalin ee soo socota, islamarkaana Maalinta Saddexaad laga soo saari doono Warmurtiyeed rasmi ah oo Musharaxiinta ay isla garteen.
Previous articleR/Wasaaraha oo amar siiyay hoggaanka Maamulka Gobolka Banaadir
Next articleRa’iisul Wasaaraha Somaliya oo ku sii jeeda Magaalada Baydhabo